Madaxweyne Farmaajo Ayaa Ka Qeyb Qaadan Doono Shir Kadhacaaya Dalka Kenya – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in dhamaadka bishan uu booqasho ku tago dalka Kenya, taasoo noqon doonta booqashadii u horeysay ee uu ku tago mid ka mid ah dalalka deriska ah.
Sida ay sheegayaan wararka Madaxweynaha ayaa uga qeyb galaya Nairobi shir gaar ah oo Madaxda Urur Goboleedka IGAD uga arrinsanayaan xaalada qaxootiga Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in la soo gaarsiiyay casuumaada shirkan, waxaana ka sokow casuumaada shirkaas jiray martiqaad rasmi ah oo Madaxweynaha Kenya u fidiyay, markii uu u imaanayay caleema saarkiisa bishii la soo dhaafay.
Waxaa uu sheegay inay si weyn u soo dhoweyn doonaan Madaxweynaha, isagoo tilmaamay ka hor imaanshihiisa ay dowladda kenya qaadi doonto tallaabo weyn oo xiriirka labada dal muujinaysa.
Kenya iyo Soomaaliya ayaa xilligan waxaa u dhaxeeya muran la xiriira badda, iyadoo Maxkamadda Caalamiga ay hor-taala dooda labada dal u dhaxeysa oo dhowaan Maxkamaddu go’aamisay inay qaado.
Dowladdii uu hoggaaminayay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh ayaa meel fiican gaarsiisay dacwada taala Maxkamadda Hague, iyadoo dhowr jeer diiday in dacwada lagu xaliyo wada hadal, si looga maarmo Maxkamadda.
Cabdi Wali Gaas oo Boosaaso kula kulmay Odayaasha Dhaqanka (Daawo Sawirada)